Marketing ဆောငျးပါးမြား	<< < 1234>>>	MARKETING (R&D) ဈေးကွက်သုသေသနပြုမှုနှင့် ဖွံ့ဖြိုးတ&
စီးပွားရေးသဘောအရ Market Segmentation (ဈေးကွက်တွင်း မတူညီစွာခွဲခြားသတ်မှတ်မှုများ) ဖြစ်တဲ့ Geographic – Region, State, City, Township level: နေရာဒေသနှင့် ဆိုင်သော - ပြည်နယ်၊ တိုင်း၊ မြို့၊ မြို့နယ် အဆင့်များ မတူညီခြင်း၊ Demographic – Age, Sex, Family, Shop, Organization and Company: လူမှုဝန်းကျင်ဆိုင်ရာ - အသက်၊ ကျား/မ၊ ဈေးဆိုင်၊ ကုမ္ပဏီ နှင&# ....Read more	Saleman တိုင်းသိထားသင့်တဲ့ အချက်(၅)ခု
အရောင်းပညာက အသုံးမ၀င်တော့ဘူးလို့ ထင်ပါသလား ? နည်းပညာတွေက အစားထိုးဝင်ရောက်လာတဲ့အတွက် အရောင်းသမားတွေ မလိုတော့ဘူးလို့ ယူဆထားပါသလား ? သေချာတာတစ်ခုက ဒီလိုဘယ်တော့မှ ဖြစ်လာမှာမဟုတ်ဘူး ဆိုတာပါပဲ။ နည်းပညာတွေ ဘယ်လောက်ပဲ အဆင့်မြင့်လာပါစေ၊ ဘယ& ....Read more	7 Ps Marketing (ဈေးကွက်စီးပွားရေး မဟာဗျူဟာများ)
Marketing ဆိုတာ လုပ်ငန်းတစ်ခုအောင်မြင်ရဲ့ အရေးကြီးတဲ့မဟာဗျူဟာတစ်ခုလို့ဆိုနိုင်ပါတယ်။ မိမိထုတ်ကုန်၊ ၀န်ဆောင်မှု နှင့် ဖောက်သည်အကြား ဆက်သွယ်ပေးနိုင်တာ Marketing ကသာ အခရာဖော်ဆောင်ပေးသွားခြင်းပဲဖြစ်ပါတယ်။ ကမ္ဘာမှာတော့ Everything is Marketing လို့ဆိုပါတယ်။ အောင်မြင်တဲ ....Read more	Traditional Marketing နဲ့ Digital Marketing နှိုင်းယှဉ်ခြင်း
မားကတ်တင်းဆိုတဲ့သဘောက Customer တွေရဲ့ လိုအပ်ချက်၊လိုအင်ဆန္ဒတွေကို ဖြည့်ဆည်းပေးရင်း မိမိအတွက် အမြတ်ဖန်တီးတဲ့သဘောပါ။ Customer တွေရဲ့ လိုအင်တွေကို ဖြည့်ဆည်းဖို့ နည်းလမ်းအမျိုးမျို ....Read more	ကုနျသှယျရေး